SIDEE LOO KAYDIYAA HADHUUDHKII LA KARIYEY EE GURIGA: WAA LAGA TAGI KARAA BIYO, AMA SI FIICAN U MIIRAY; IYO SIDOO KALE KAYDINTA QABOOJIYAHA IYO SIYAABO KALE - KHUDRADDA
Hadab la kariyey: sida ugu fiican ee loo kaydiyo?
Ku raaxeeysan raaxo badan oo khudaarta - hadhuudhka - maaha sabab la'aan loo yaqaan "boqoradda beertu." Faytamiin iyo macdanta macdanta iyo dhadhanka aadka u fiican waxay ka dhigaan suxuunta galleyda (oo sidoo kale loo yaqaano hadhuudh) ma aha oo kaliya daaweyn soo dhaweyn ah oo ku saabsan miisaska, laakiin sidoo kale dukaamo faa'iido u leh jirka bini'aadamka.
Qodobkan waxaan ka hadli doonaa sifooyinka aasaasiga ah ee firileyda cajiibka ah, hababka diyaarinta iyo kaydinta.
Corn waxa ay u fiican tahay caafimaadka faleebada, dufanka iyo saliidaha lagama maarmaanka ah, fitamiinada A, C, PP, E, ku dhawaad ​​dhammaan kooxda B, tiro badan oo macdan ah - magnesium, calcium, manganese, birta, fosfooraska, zinc iyo kuwa kale.
Caawin! Cawsku wuxuu isku daraa 26 qaybood ee miisaanka xilliyaysan, sidaas awgeed waxaa loo isticmaalaa sidii qalab wax ku ool ah si loo xoojiyo nidaamka difaaca iyo daaweynta cuduro badan.
Corn wuxuu ka caawiyaa nadiifinta jirka, ka saarida sunta iyo sunta. Inkasta oo uu ka kooban yahay kalooriyada oo sarreeya (laga bilaabo 88 ilaa 325 kcal halkii 100 g), waxay yareysaa kolestaroolka, waxay caadiyan dheef-shiid kiimikaadkuna waxay caawisaa in ay la dagaallamaan miisaanka xad-dhaafka ah. Cunista hadhuudhku waa ka hortag wanaagsan ee cudurrada wadnaha.
Cawsku wuxuu leeyahay hindhiso maqaarka iyo choleretic ah, sidaa daraadeed waxa ay wax ku ool u tahay daaweynta adag ee dhiig-baxa iyo ka-qaadista bararka. Corn wuxuu u fiican yahay habka dheef-shiidka: wuxuu xakameynayaa shaqada caloosha iyo mindhicirka.
Si aad uguqorsho jirkaada maaddooyinka waxtar leh ee ku jira hadhuudhka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo kariyo siiriyaalka si sax ah iyo xaaladaha lagu kaydiyo saxanka. Halkaan, hooyooyinka intooda badani waxay la kulmaan dhibaatada: in la daadiyo ama aan biyuhu daadin ka dib marka la karinayo hadhuudhka. Jawaabta su'aashani waxay ku xiran tahay mudada iyo qaabka aad udiyaarinayso inaad kaydiso alaabta la dhammeeyey.
Miyuu suurtagal ah in laga tago hadhuudhkan biyo ama u baahan yahay ama ku daadi? Guriyaalku waxay og yihiin in ay aad ugu fiicantahay in la cuno hadhuudh cusub oo diyaarsan. Si kastaba ha ahaatee, haddii khudradda la kariyey si habboon loogu diyaariyo kaydinta, waxaad awoodi doontaa inaad badbaadiso labada dhadhan iyo fitamiin "bouquet".
Haddii aad ubaahan tahay inaad sii wadato cobs-ka-diyaarinta wakhti gaaban, ka dibna habka ugu kalsoonaanta lagu kalsoon yahay waa in laga tago hadhuudhka biyaha karkaraya, kuna duub suxuunta taas oo lagu kariyey maro adag ama dhar diiran. Sidoo kale, siriyaalka la karkariyey waxaa lagu duubi karaa bacaha waxayna ku duuban yihiin buste kulul. Habka la xaqiijiyay in laga dhigo hadhuudh kulul oo jilicsan saacado badan ayaa ah in lagu duubo koollada dhowr lakab oo ah foorno.
MUWAADIN MUHIIM AHin dhammaan hababka kor ku xusan heerkulka qolka uu shaqeyn doono ugu badnaan toban saacadood. Xilligaas ka dib, laguma talinayo in la cuno hadhuudhka sidan oo kale.
Si aad u badbaadiso badeecada dhammaatay dhowr maalmood, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho mid ka mid ah hababka soo socda:
Ka daa cajiishada digsiyada oo leh maraq, qaboojin, kuna soo dir qaboojiyaha, halkaas oo ay ahaan doonaan kuwo cusub, jilicsan oo dhadhan fiican leh ugu yaraan saddex maalmood.
Waxaad sidoo kale ka saari kartaa miro diyaar ah oo biyo ah, qabow, ku rid weel caag ah leh dabool daboolan, ku rid qaboojiyaha.
Si sahlan iyo waxtar leh waxay kaydin doonaan hadhuudhkii la kariyey ee qaabka miraha. Kala saarista kaabayaasha iyo meelaynta qabow ee xirmada, waxaa laguu balan qaadayaa inaad alaabta ka dhigto mid cusub oo casiir leh ugu yaraan laba ama saddex maalmood.
By jidka qaabka miro, miraha la kariyey waa la ilaalin karaa illaa saddex bilood. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay:
qaboojiye ah oo dhameystiran;
si loo kala saaro hadhuudhka;
ku shub weel dhalada ah;
ku shub biyo cusbayn leh la kariyey;
si adag u xir oo nadiifi meel qabow;
dhowr toddobaad kadib, waxaa lagu talinayaa in lagu daro biyo cusbo ah (1 tsp oo milix ah halkii litir oo biyo ah).
Iyadoo aan loo eegin marka aad ka soo baxdo hadhuudhkii la kariyey ee ka soo baxay decoction, ha ku degdegin inaad ku shubto. Waa mid dhadhan fiican leh, nafaqo leh, waxaana loo isticmaali karaa labadaba ujeedo nafaqo ah, tusaale ahaan, mashiinka dhirta ama sameynta maraq, iyo kareemka jirka - si loo xoojiyo ciddiyaha iyo timaha, iyo in la ilaaliyo maqaarka wajiga.
Caawin miyaa caawinaad ah?
Khaldad caadi ah oo caadi ah ayaa ah in hadhuudhku yahay roodi xilliyeedka. Xaqiiqdii, marka lagu kaydiyo biyo qabow, waxaad ku raaxeysan kartaa siriyalka khudaarta sanadka oo dhan. Intaa waxaa dheer, habkan kaydinta waa mid ku habboon labadaba la kariyey iyo hadhuudh cusub.
Dhuxulada la kariyey waxaa lagu keydin karaa barafeeyaha laga bilaabo 8 bilood illaa hal sano. Si taas loo sameeyo, waxay u baahan yihiin:
ka saara hawada xad dhaafka ah;
Haddii aadan haysanin meel ku filan qaboojiyaha, waxaa ugu wanaagsan inaad kuhesho digirta hadhuudhka ah:
kala saar qeybaha la kariyey;
ku dabool hal lakab oo ah dusha dhul;
ku rid qaboojiyaha saacad ama laba saacadood;
kadibna ku shub miirka la qaboojiyey ee baakadaha, ku dheji daboolka una dhig meel qaboojiyaha.
TALO! Hadheeyada cusub ayaa sidoo kale lagu xakameyn karaa koollada iyo badarka.
Haddii aad dooratay ikhtiyaarka kowaad, ka dib waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in hadhuudhku uusan noqon "xargaha":
Kahor intaan la dhigin rugta, waxaa lagugula talinayaa inaad maro, ka dib markii aad ka nadiifisid caleemo aan caadi ahayn.
Marka caleemaha yar yar ay weli kudhicaan hadhuudhka, waa in si kale loo yareeyo biyaha karkaraya, kadibna biyo baraf ah. Rugta yaryar oo yar yar oo qiyaastii 10 daqiiqo, weyn - 15 daqiiqo.
Markaas waa la qalajiyey, ku duudduubay filim duufaan ah oo ku riday qaboojiyaha.
Nolosha khudradda ee hadhuudhka leh qaboojinta noocan oo kale ah waxay noqon doontaa ilaa lix bilood.
Haddii aad qaboojisid, hadhuudhku sidoo kale waxay u baahan yihiin in la kariyo. Ka dib, ka dib markaad kala soocaysid miro, ku dhaji hal lakab, ku rid bacaha oo u soo dir kaydinta qaboojiyaha.
Daawo fiidiyowga ku saabsan barafka barafowga jiilaalka laba siyaabood:
Iyo siyaabo badan
Waqti gaaban, hadhuudhka waxaa lagu keydin karaa qaybta khudradda ee qaboojiyaha. Halkan, siriyaal delicious ah muddo 10 cisho ah ayaa haysan kara sifooyinka faa'iidada leh waxayna ku sii jiri karaan diyaarinta dheeraad ah. Si arrintan loo sameeyo, waa inaad ka tagtaa cobarka caleenta, ku duub bacda balaastigga ah, adoo ka dhigaya godad ku dhex jira, sidaa darteed hadhuudhku "ma jilbaaxo", u dir qaboojiyaha. Waa lagama maarmaan in la nadiifiyo hadhuudhka lagu kaydiyey qaboojiyaha isla markiiba kahor inta aan la karin.
Qiyaastii saddex toddobaad oo hadhuudh ah ayaa lagu keydin doonaa qaybta khudradda, haddii aad u dirto qaboojiyaha digirta. Tilmaamaha tabaha kiiskan waa:
Cobs waa in si fiican loo nadiifiyaa.
Ka dibna ku rid 15-20 daqiiqo digsi biyo, buro baraf, liin iyo milix (1 qaado oo halkii litir oo biyo ah).
Ka dib markaa, kala saar midhaha.
Biyaha ku daadi khaanadaha.
Hermetically ku rid alaabta hadiyadaha caagagga bacaha ama bacaha.
Ku rid qaboojiyaha.
Marka laga hadlayo kaydinta muddada dheer ee hadhuudhka ka baxsan qaboojiyaha, waxaan ku siinaynaa laba siyood.
OGAYSIIS, taas oo hadhuudhka qasacadaysan waxay noqotaa mid aad u caansan guriga. Marxaladda diyaarinta ee loogu talagalay, hadhuudhka waa in la nadiifiyaa, la dhaqaa loona burburiyaa miro. Kala duwanaanta ficilada dheeraadka ah waxaa jira dad badan.
Daryeelkaaga waxaa lagu martiqaaday qashinka ilaalinta, kaas oo noqday bakhshiimo heer qaran ah:
Diyaari brine at heerka 3 tsp. sonkorta iyo milixda ilaa 1 litir oo biyo ah.
Isku faafi hadhuudhka dhalooyinka barafeysan, buuxi brine, ku dar dhir udgoon.
Is dabajooga dhalooyinka oo ku rid kilin, maqaasiinka ama qolka hoose.
Dalagyada qasacadaysan waxaa loo isticmaali karaa cunto ahaan muddo saddex sano ah. Tani waa faaiido weyn oo ka mid ah caanaha guryaha ka hor dukaanka, nolosha shelf ee taas oo u sabab ah kaydinta ee aan ka badan hal ama laba sano.
Habka hadhuudhka loogu talagalay kuwa qorsheynaya inay sameeyaan bur ama siriyaal dalag dalagga ah:
Si arrintan loo sameeyo, hadhuudh waa in la qalajiyaa.
Dhuxulada ayaa la caleemo saaray caleenta, caleemaha hadhuudhka ah ayaa laga soo saaraa iyaga oo laga joojiyay caleemaha hooska.
Ka dib qallajinta dabiiciga ah, miro ayaa la nadiifiyaa oo qorraxda ka tagay ilaa diyaar.
Sidoo kale waxaad ku qallajin kartaa foornada wax yar.
Way ka fiican tahay in lagu kaydiyo hadhuudhka qalalan ee bacaha marada.
Maaddooyinkeenna waxaad baran kartaa sida loo kariyo hadhuudhka:
mashiinka qafiifka ah;
ee mashiinka dhaadheer;
oo ku jira boorso laba ah;
on the cob;
Mid kasta oo ka mid ah hababka kor ku xusan ee kaydinta hadhuudhku kuma haboonaan dhadhankaaga, xasuusnow: adigoo ku beeraya firileyda mustaqbalka, waxaad naftaada siinaysaa nafaqo iyo nafaqo leh oo keliya, laakiin sidoo kale fiitamiinada tamarta nadaamka jirka. Ka dib oo dhan, hadhuudh waa mid ka mid ah alaabooyinka kuwaas oo aan lumin guryaha ay qaab kasta.